“Ummadda Somaliland waxaan ugu baaqayaa in loo guntado sidii nabad loogu raadin lahaa beelaha Beladu ka dhex taagan tahay”… | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Ummadda Somaliland waxaan ugu baaqayaa in loo guntado sidii nabad loogu raadin lahaa beelaha Beladu ka dhex taagan tahay”…
Hargaysa (SDWO): Suldaanka guud ee beelaha Somaliland dega suldaan Maxamed suldaan C/qaadir ayaa ku baaqay gebi ahaan si weyn loogu wada istaago deminta colaad beeleedka Ceel-Afweyn, gurmad xoogaan oo aan loo kala hadhina laga gallo.
Waxaanu sheegay in dadka ergadda ah ee loo dirayo deminta colaadaasi in ay noqdaan kuwo ay ka go’an tahay sidii nabad gelyo looga dhex dhalin lahaa beelaha walaalaha ah ee colaadu u dhaxayso.
Waxaanu yidhi “Ummadda reer Somaliland, culimo, cuqaal, ganacsato, iyo cid kastaba waxaan ugu baaqayaa in loo guntado sidii nabad gelyo loogu raadin lahaa labadaas beelood ee Beladu ka dhex taagan tahay.
Waxaan leeyahay dadku gurmad xoogga ha ka galaan, oo yaan loo kala hadhin, xukuumad iyo shacbiba. Waana in la baxo, oo meesha la tago”.
Suldaanka ayaa intaasi ku daray “Dadka ergadda u tegaya Ceel-Afweyn, waxaan soo jeedinayaa nafihiina u hurra nabad gelyadda. Waayo? Si kale oo ay nabadu ku imanaysaa ma jirto. Laakiin marka ergadu kaa xumaato, ayay waxyeeladda iyo dhibaatadu timaadaa.
Laakiin ergadda ku soo tallo gashay in ay iyagu nafahoodda ku waayaan, markaas ayay ergadu wax wanaagsan noqonaysaa”ayuu yidhi suldaan Maxamed.
Waxa kaloo uu sheegay suldaanku in isaga laftiisu uu ka qayb qaadanayo xalinta colaad beeleedkaasi, isla markaana uu si dhakhso ah ugu ambabaxayo.
Waxaanu yidhi “Aniga ayaana idiinku horaynaya, nabad gelyadaas sida loo raadinayo. Cidii I raacaysa, anigu diyar ayaan ahay. Somaliland-na ha guulaysato ayaan leeyahay, nabad gelyana ha isku raacdo”.
Ugu danbayn suldaan Maxamed C/qaadir, waxa uu si gaara baaq ugu diray beelaha dirirtu ka dhaxayso oo uu ugu baaqay in iyagu dhexdoodda inta aan cid kale-ba u gurman ay ka shaqeeyaan sidii ay u daawayn lahaayeen kala qaybsanaanta dhexdoodda ka jirta.
“Dadka Ceel-Afweyn, waxaan leeyahay nabadiina si wada jira in aad u ilaashataan mooyee, midkiinba haddii uu is yidhaahdo kala kale ka aargooso , waa kugu dhimay oo kaa dhimay”ayuu yidhi suldaan Maxamed C/qaadir.